छोरीको बिहेमा दाइजोमा किन दिइयो २१ वटा वि षा लु सर्प,धन सम्पत्तिको साटो सर्प दिनुको कारण यस्तो छ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/छोरीको बिहेमा दाइजोमा किन दिइयो २१ वटा वि षा लु सर्प,धन सम्पत्तिको साटो सर्प दिनुको कारण यस्तो छ !
अधिकांशलाई छोरीको बिहेमा दाइजोस्वरुप खाट, दराज, भाँडाकुँडा दिएको मात्रै थाहा छ होला । यद्यपी संसारमा अनौठा चीजहरु दाइजोमा दिइन्छन् ।
अन्य ठाउँमा बिवाहको मिति तय गर्नेबित्तिकै पैसा खोज्न थालिन्छ दाइजोका लागि । छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा यस्तो समुदाय छ जहाँ आफ्नो छोरीको बिहेको टुंगो लागेसँगै दाइजोमा दिइने सर्प खोज्न सुरु गर्दछन् । छोरीको बिहेमा २१ वटा विभिन्न ख त र नाक वि षा लु सर्प दाइजोको रुपमा दिनुपर्दछ । त्यहाँको गौरिया समुदायमा सदियौँदेखि उक्त परम्परा चलिआएको छ ।
मध्यप्रदेश प्रान्तमा बस्ने गौरिया समुदायमा उक्त प्रचलन रहेको छ । सो समुदायमा छोरीको बिहेका बेला नयाँ ज्वाइँलाई दाइजोको रुपमा २१ वटा विषालु सर्प दिइन्छ । यदि बिहेमा सर्प दाइजो नदिएमा छोरीको वैवाहिक सम्बन्ध छिट्टै नै टुट्दछ भन्ने आम विश्वास उक्त समुदायमा रहिआएको छ ।
सो समुदाय सर्पसँग रत्तिभर डराउँदैन । बच्चाहरुसमेत सानैदेखि सर्पसँग खेल्दछन् र नडराइकन सर्प समाउने गर्दछन् । उसो त यो समुदायको मुख्य पेसा नै सर्प पक्रिने हो । सर्प समाएर मानिसहरुलाई देखाउने र नचाउने गरेरै उनीहरुले पैसा कमाउँछन् र जीविकोपार्जन गर्दछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :काठमाण्डौ उपत्यकामा को…नाको जोखि म बढ्दै गएपछि सरकारले आवतजावतमा कडा इ गरेको छ । मास्क नलगाउने, मोटरसाइकलमा दुईजना चढ्ने, जोरबिजोर नियम उल्लंघन गर्ने तथा पासको दु रु पयोग गर्नेलाई प्रहरीले निग रानी गर्न थालेको छ ।
पासको दुरुप योग गर्नेहरु हरेक दिन १५ सयदेखि २ हजारसम्म कार बाहीमा परिरहेका महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।अस्पताल जानुपर्ने लगायत अति आवश्यक काममा निस्किएकाहरुलाई भने आवश्यकता अनुसार छाडिएको उहाँले बताउनुभयो ।
घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क नलगाउनेहरु पनि का रबा हीमा पर्न थालेका छन् । हिजो मात्रै मास्क नलगाई हिँड्ने १२ सय भन्दा धेरै व्यक्तिलाई सम्झाएर छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अबको केही दिन मास्क लगाउन स म्झाईबुझा ईको काम गर्ने र अटे री बढ्दै गए उनीहरुलाई प क्रा उ गरी कार बा ही गरिने प्रहरीले जनाएको छ । कसैले मास्क नलगाई हिँडेको छ भने उसलाई स ङ्क्रम ण रोग नि यन्त्र ण ऐन २०२० अनुसार का रबा ही गर्न सकिने प्रहरीको भनाई छ । नियम उ ल्लंघ न गर्नेलाई स ङ्क्र मण रोग निय न्त्रण ऐन २०२० अनुसार एक महिनासम्म कै द अथवा एक सय रुपैयाँ जरि वा नाको सजा य हुन सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपाल आएको सलह किरा निष्क्रिय,पानी परिरहेकोले सलह अब सक्रिय हुने सम्भावना कम !!!नेपाल आएको सलह किरा निष्क्रिय भएको प्लाण्ट क्वरेण्टीन तथा वि षा दी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । गएको तीन दिनदेखि सलहको झुण्ड कतै नदेखिएको, मरेका सलह भेटिएको र निरन्तर पानी परिरहेकोले नेपाल आएका सलह अब सक्रिय हुने सम्भावना सकिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सलह किरा १६ डिग्री सेल्सियसभन्दा तलको तापक्रममा नबाँच्ने, हावाका कारण सलह लेकतर्फ लागेको, नेपाल आएका झुण्ड तितरबितर भएको र पानी पर्दा सक्रिय हुन नसक्नेजस्ता कारण नेपाल आएको सलहले धेरै क्ष ति गर्न नपाएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो ।
बाग्लुङको ढोरपाटन क्षेत्रमा धेरैको सङ्ख्यामा सलह म रे काे पाइएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै कालीकोट, रुकुम, मुस्ताङ लगायतका ठाउँमा झुण्ड पुगे पनि चिसो हावापानीकाे कारण आफै म रेका हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल भित्रिएका झण्डै ८० लाख सलह किरा स–साना झुण्डमा बाँडिएर देशका ५५ वटा जिल्लामा पुगेका थिए ।
सलहले दाङ, प्युठान, मकवानपुर, अर्घाखाँची र पाल्पामा बढी क्षति पुर्‍याएको प्लान्ट क्वरेण्टीन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । यसैबीच भारतमा रहेको अरु झुण्ड नेपाल आउने सम्भावना पनि कम भएको सूचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा एक जना सं’क्रमित फेला पार्न लाख भन्दा बढी खर्च हुँदै ! यस्तो छ हिसाब …
पानीमुनि गएर प्रेमिकालाई विवाहको प्रस्ताव राख्ने युवक सधैका लागी पानी भित्रै अ’स्ताए !